Ezinye imbono ukukhululwa ezizayo
EyoMqungu 10, 2010 ngokuthi umnikelo 4 izimvo
Inguqulelo olandelayo uza kuquka ezinye iinguqu ezinentsingiselo kwicala lomxhasi, ikakhulu siye abatshintshela kulayishwa olungenangqamaniso ephepha yethu kunye nemfuno kulayishwa ezinye zeempendulo lusebenziswe ngaphakathi (ezifana jQuery UI, Translations API, Microsoft Guqulela API kunye nabanye).
Utshintsho kuthetha ukuba imithwalo page kakhulu ngokukhawuleza kwaye kube zikwazi. Kwakhona hangups ukuba zazibangelwa kulayishwa olucothayo eempendulo iqela lesithathu (ezifana enye ingxelo kwi eli gciwane) baya kutshatyalaliswa.
Le ukukhululwa Kwakusenokufuneka kohlaziyo jQuery 1.4 onendima injini ngokukhawuleza kakhulu, kwaye ukusukela ukuba uncwelwe ukukhululwa ngoJanuwari 14, sinethemba lokuba ndinikhululele nge-15.
Yangaphambi-ukukhululwa sele iqhuba kule sayithi, ngoko ke, ukuba ufumana naziphi na iingxaki amaphepha iguqulelwe, nceda sazise.
ifayilishwe Phantsi: Imiyalezo Jikelele ephawulweyo Nge: jQuery, izincedisi isantya